Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. वाम गठबन्धनको कार्यदलले माघ पहिलो साताभित्रै प्रतिवेदन तयार पार्ने – Emountain TV
वाम गठबन्धनको कार्यदलले माघ पहिलो साताभित्रै प्रतिवेदन तयार पार्ने
काठमाडाैं, २९ पुस । प्रदेशसभा गठन र राष्ट्रियसभाको सिट बाँडफाँडमा सहमति जुटाउने जिम्मा पाएको वाम गठबन्धनको कार्यदलले माघ पहिलो साताभित्रै प्रतिवेदन तयार पार्ने भएको छ ।
प्रदेश मुख्यमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाको सिट संख्या बाँडफाँडको मापदण्ड तयार पारेको कार्यदलले त्यसमा सहमति कायम गरी नेतृत्वलाई माघ १० गते रिपोर्ट बुझाउने तयारी गरेको हो । शुक्रबार बसेकाे पहिलो बैठकमा कार्यदलले प्रदेश सरकार र राष्ट्रियसभामा सिफारिसका लागि आवश्यक केही आधार तयार पारेको छ ।
शनिबार अपरान्ह सिंहदरबारमा बस्ने बैठकमा विशेष छलफल गरिने कार्यदल सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनको परिणाम, एकताको भावना, योग्यता र सन्तुलनका आधारमा सिट बाँडफाँड गर्ने गरी तयारी भएको कार्यदल सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले बताए ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि माघ १० गते उम्मेदवारको मनोनयन तोकिएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रदेशको समानुपातिकतर्फको नतिजा सार्वजनिक गरेपछि प्रदेश सरकार गठन र सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ६० र ४० प्रतिशत उम्मेदवार लिएर चुनावमा भाग लिएका एमाले र माओवादी केन्द्रले ७० र ३० प्रतिशत जित हासिल गरेका थिए । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि ६० र ४० कै भागबण्डा गर्नेबारे एमाले र माओवादी नेताबीच अनौपचारिक कुराकानी भए पनि एकताको भावनाअनुसार अघि बढ्ने कुरालाई कार्यदलले जोड दिएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थाइल्याण्डबाट फर्किनुअघि नै कार्यदलले बाँडफाँडको टुंगो लगाउने नेताहरूले बताएका छन् । कार्यदलमा एमालेका तर्फबाट सुवासचन्द्र नेम्बाङ, शंकर पोखरेल र सुरेन्द्र पाण्डे तथा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट रामबहादुर थापा, बर्षमान पुन र मातृका यादव हुनुहुन्छ ।